Music Christian waa cuntada Naf kaliya ayaa cadeeyay in ay ka shaqeeyaan marka wax walba oo kale ayaa ku guuldareystay. Inta badan ku sifayn ee Christian quruxsan u muuqataa sidii songs loomana baahno caan ah oo aad ka maqashiin raadiyaha, laakiin farqiga u keeno ku saabsan fariin sida ay diirada nafta. Music Christian abuuraa goobta rajo xaalad rajo iyo waa sababtan aawadeed in badan oo ka dhalatay in noocani waqtiyada adag. Waxaa jira 1000 ee fanaaniinta Christian laakiin qodobkan waxaa ku jira liis ay ku qoran kuwa ku sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican in noocani.
Part1. Me Mercy.
Part7. Ridaya taaj
1. ii naxariiso.
I Mercy waa urur music casriga American aasaasay, USA Texas. Band ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1994, wuxuu ka kooban yahay lix xubnood. Kooxda ayaa heshay magac iyo aqoonsi ka dib markii la sii daayo, iskutallaabtiisana hore ka badan hal "Waxaan qiyaasi karaa oo keliya" taas oo horseeday in kulankiisii ​​ugu horeysay ee ay album hore "ku dhawaad ​​jiraan". Tan iyo markaas kooxda la sii daayay lix albums studio dheeraad ah oo uu ku dhacay 13 oo isku xigta shanta kali ku songs boor Christian qeexo la 7 iyaga oo gaarey lahayn. 1. band ayaa ku guuleystay 8 Dove Awards, 1 ASCAP abaalmarinta iyo 2 abaalmarinta American music. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Waxaan qiyaasi karaa oo kaliya
Sayidow, waan magacaaga sare u qaadi.
Hillsong band midaysan yahay urur cibaadada in asalkiisu ka soo jeedo oo qayb ka ah kaniisadda Hillsong ee Sydney, Australia ah. Waxa asaasay sanadkii 1998, waxa uu ka kooban yahay dhowr ah madaxda qoqobada ka kiniisadda la hogaamiye Darlene Zschech. Sii daayay askartii oo ay album hore samada beddelo Taabashada dhulka in iyaga siiyey iimaanka iyo aqoonsi iyo tan iyo markaasna waxa ay ku sii daayay 11 sanadlaha albums nool iyo afar albums studio. In 2013, Oceans song ay hal cagaha darnaadeen gaaray No.1 on heeso American boor Christian shaxda. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda.
Badbaadiyo u xoogga badan
Badbaadada halkan waa
Rajaynaynaa in dunida.
Carrie Underwood dhashay 10 March, 1983, waa American ah oo gabayaa ahaa, Xisbi iyo aktarada. Waxay ka kooban Christian badan music dhiirigalin oo waxay u keceen inay warkiisiina wuxuu ku guuleystay xilli ciyaareedka soo of American Idol ee 2005. Waxay jebiyey diiwaanka music dhowr ah oo ay tani keentay iyada in la degmnada in Music Oklahoma ah Hall of Fame in 2009.She uu leeyahay guulaystay abaalmarino kala duwan oo ay ku jiraan 7 abaalmarinta Grammy iyo toddoba iyo boor Music Awards. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Ciise qaado giraangirta.
Mama ee song
Francescar Battistelli ku dhashay on May 18, 1985, waa muusikiiste Christian, Xisbi iyo artist lagu qoro ka New York, City a a. Waxay sii daayay iyada "u ahay daynin" horeysay hal 2008dii, waxaana uu charted on National Christian gooldhalinta Taariikhdii tan iyo markaas oo helay iyada Award Magacaabida ugu horeysay Grammy 2009-qabadka injiilka ugu fiican. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Waxa uu magacayga ogyahay
Beautiful qurux badan
Lecrae Moore waa fanaan hip hop Christian, Xisbi iyo rikoor ah soosaare Maraykan ah ku dhashay on October 9, 1979. Waxa uu yahay wada-aasaasihii Label Independent Record iyo Madaxweynaha Reachlife Wasaaradaha. Uu album Solo saddexaad Mucaaradka sii daayay sanadkii 2008 noqday heestii hip hop hore si ay u gaaraan lahayn. 1 ku Chart boor Christian. Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Grammy ee album ugu wanaagsan ee injiilka ee 2013 abaalmarinta Grammy. Isagu waa caan ah oo si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Dhammaan waxaan u baahan tahay waa in aad
U sheeg adduunka
Ha ku dhumin noloshaada.
Newsboys waa Koox dhagax weyn pop Christian la aasaasay 1985 in Queensland, Australia. Band wuxuu ka kooban yahay 4 fannaaniinta si fiican u yaqaan for waxqabadkooda muusikada. Waxay ku sii daayay 16 albums 6 of kuwaas oo shahaado dahab. Band ayaa ku guuleystay Dove Award ee 1995 album dhagaxa weyn ee sannadka. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Ilaah ma ahan dhintay
Waxaan aaminsan nahay
Waxa uu u taliyaa
7. taaj ridaya
Ridaya taaj waa Koox dhagax weyn Christian bilaabay sanadkii 1999 by wadaad dhalinyarada Mark Hall ee xeebta Dayton, Florida USA band wuxuu ka kooban yahay 7 xubnood oo uu ku guuleystay abaalmarinta Grammy iyo Dove. Waxay heleen shahaado dahabka ee ugu horreysay gabaygii hal "Bal yaan ahay anigu" iyo sanadkii 2005 ay lifesong soo baxay at No.9 ee 200 albums boor shaxda. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Aad ammaana duufaanka.
Needtobreathe waa band Maraykan ah oo casri ah Christian dhagaxa weyn ka soo Seneca, South Carolina ee USA band ayaa waxaa la sameeyay sanadkii 1998 oo uu leeyahay afar xubnood. Waxay ku sii daayay shan albums iyo 2008 ayaa u sharaxan abaalmarinta laba qoolley ee 39 GMA Dove Awards. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Wax u qurux badan
Indhahaaga ku hay furan
Maydhay biyo ah.
Phil Wickam ku dhashay on April 5, 1984 ee San Diego, California, waa casriga ah Christian vocalist, Xisbi iyo guitarist. Wickam ayaa sii daayay toddobo CDS in ay yihiin caanka ah ee dunida oo dhan iyada oo u Waxyoon fariin. Uu album hore "i sii aad erayada" ayaa la sii daayay sanadkii 2003. Waxa uu caan la hits soo socda:
Tani waa nimco cajiib ah
Mandisa Hundley waa injiilka Maraykan ah oo artist ah oo casri ah Christian dhashay on October 2, 1976 ee California, USA Waxay waxaa loo arkaa mid ka mid ah fanaaniinta Christian sare oo Mareykan ah iyo waa u laabo shanaad American Idol inuu ku guuleysto abaalmarinta Grammy ah. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Hadli karin Joy
Eebana waa idinla joogaa
> Resource > Music > Top 10 Artists Christian.